नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बिराटनगर-जोवनी नाका थुन्न गएका राजेन्द्र महतो यसरी कुटिए !
बिराटनगर-जोवनी नाका थुन्न गएका राजेन्द्र महतो यसरी कुटिए !
नाका बन्द गर्न जाँदा राजेन्द्र महतो नेता ज्यू लाठी खाएर घाइते हुनुभएछ, टाउकैमा चोट लागेछ बिचरा वहाँ राजेन्द्र बाबु साहेबलाई, दु:ख लाग्यो, धन्न वहाँको मुख, जिब्रो, आँखा, वहाँले सधैं थड्याइरहने चोर औँला, हात, खुट्टा, पछाडी ढाडका करङमा केही भएनछ ! वहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौँ सबैले ।
जोगबनी नाका अवरोध गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्दै महतो।
विराटनगरबाट पैदल यात्रा गर्दै जोगबनी जाँदै महतो।
जोगबनी नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी।
सुरक्षाकर्मीको अवरोधका बावजुद नाकाबन्दी गर्ने तयारी।
प्रहरीको लाठीचार्जपछि घाइते महतो।
विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा सिटी स्क्यान गरिँदै।
आइसियुमा राखेर उपचार गरिँदै।
सबै फोटो : उपेन्द्र महतो /pahilopost